Egwuregwu iri abụọ kacha mma Mac n'efu | Nzukọ mkpanaka
Egwuregwu 20 kacha mma Mac n'efu
Ignacio Sala | 15/10/2021 18:00 | Mac, Sistemụ arụmọrụ
Enwebeghị sistemụ arụmọrụ Mac, macOS dị ka ikpo okwu igwu egwuregwu n'ihi enweghị ike na arịrịọ Apple na -aga n'ihu, ebe Windows bụ ebe kachasị mma taa maka nwee ụdị egwuregwu ọ bụla.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe ị chọrọ n'ihe gbasara egwuregwu adịchaghị elu, na -ele ntakịrị, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ aha, kwụrụ ụgwọ yana n'efu. N'isiokwu a, anyị ga -elekwasị anya n'igosi ihe egwuregwu kacha mma maka Mac.
1 Counter-Ebu: Global mkparị
2 Njikọ nke Akụkọ Ifo
3 N'Ụzọ nke a dọọrọ n'agha,
4 Nkume obi
5 Kpakpando 2
7 Mepee TTD
9 Doki Doki Akwụkwọ Akwụkwọ!
10 N'okpuru igwe igwe nchara
11 Ụwa nke tankị Blitz
13 Akwụkwọ mpịakọta nke okenye: Legends
15 Fistant nke Frags
16 Team Ebe e wusiri 2
19 Akwụkwọ akụkọ Solitaire
Counter-Strike bụ onye nkwado nke ọtụtụ nzukọ LAN nke emere na ngwụcha afọ 90. Ọzọkwa, ọ ghọrọ otu n'ime aha izizi imepụta asọmpi ọkachamara idaha n'ime ụdị FPS (onye na -agba ụta nke mbụ).
Na 2012, Counter-Strike: Global Offensive bidoro, si otu a na-agbasa aha nke nọ n'ahịa kemgbe afọ 19 ihe odide ọhụrụ, ngwa ọgụ, maapụ na egwuregwu egwuregwu nke ahụ ghọrọ ntụaka na ụwa nke ndị na -agba ụta.
CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive) dị maka gị budata n'efu ma tinye mpaghara Danger, royale agha nke bidoro afọ ole na ole gara aga mana nke gafere na -enweghị mgbu ma ọ bụ otuto n'etiti ndị na -eso aha a.
Aha a achọrọ OS 10.11, 2,0 GHz Intel Core Duo processor, 2 GB Ram, ATI Radeon HD 2400, NVIDIA 8600M ma ọ bụ karịa, oghere diski 15 GB. Ọ dị n'efu site na Steam.
Njikọ nke Akụkọ Ifo bụ otu n'ime egwuregwu MOBA kacha ewu ewu na kụrụ egwuregwu dị, mana dọọ aka na ntị, nke a bụ egwuregwu dị mgbagwoju anya na asọmpi dị ukwuu.
Na Njikọ nke Akụkọ Ifo, ị ga -ebibi njikọ nke ndị otu na -emegide nke dị n'etiti ntọala echekwara. Agha ndị ahụ ha na -ewe ihe dị ka nkeji 20 ruo 60.
Ihe odide anyị na -enweta ahụmịhe n'ime egwuregwu ọ bụla nke na -enye ohere nweta ọlaedo enwere ike iji zụta ihe n'ime egwuregwu ka iwelie ike na ikike gị.
I nwere ihe kariri Ndị mmeri 100 dị n'aka gị, ị nwekwara ike imefu ego ịzụta ha. Agbanyeghị na ọ bụ aha efu, a na -enweta ego dabere na ịzụrụ ihe ịchọ mma nke anaghị etinye ma ọ bụ nye ndị egwuregwu ohere.
Njikọ Legendes chọrọ OS 10.10, 3 GHz processor (yana nkwado SSE2), 2 GB nke RAM (akwadoro 4 GB), NVIDIA GeForce 8600M GT, ATI Radeon HD 2600 ma ọ bụ karịa, 5 GB nke ohere diski ike na anyị nwere ike ibudata ya. site na weebụsaịtị ya.
N'Ụzọ nke a dọọrọ n'agha,
Ọtụtụ na-ekwu na Ụzọ mpụga ka mma karịa Diablo 3, mana maka ụcha ụtọ. Ụzọ nke Mpụga bụ ihe RPG etinyere n'ime ụwa echiche efu.
Egwuregwu ya na ihe ịchọ mma ya yiri nke Diablo 3, mana ụzọ mpụga na -arụtụ aka na -elekwasị anya na ọgụ visceral, ihe ndị siri ike na ịhazi oke miri emi Nke ihe odide.
N'Ụzọ nke a dọọrọ n'agha, na -enwe mmetụta dị ka usoro nke Diablo 2 karịa Diablo 3. Ọ bụ ezie na Diablo 3 na -achọkarị ndị egwuregwu nkịtị, Ụzọ Mpụga na -achọsi ike, ntaramahụhụ na mgbagwoju anya.
na Ụzọ chọrọ Ha bụ OS 10.13, 7 GHz Intel Core i2,6 processor, 8 GB nke Ram, ATI Radeon Pro 450,40 GB nke ohere diski ike ma ị nwere ike budata ya Steam.
Hearthstone bụ nke gị kaadị kaadị azụmaahịa dijitalụ dabere na mbara igwe Warcraft. Hearthstone dị mfe karịa ka ị nwere ike iche. N'ime egwuregwu ọ bụla, ị na-adọta kaadị atọ ma ọ bụ anọ (dabere na onye na-ebu ụzọ) site na oche kaadị iri atọ.
Enwere ụdị kaadị dị iche iche (ngwa ọgụ, mgbaasị na ihe e kere eke) na ebumnuche bụ ịbelata ahụike onye mmegide gị tupu ya emee gị ihe ahụ.
Hearthstone bụ dị mfe ịmụta maka ndị egwuregwu ọhụrụ na onye na -eri ahụ nke ukwuu ozugbo ị mụta igwe. A na -ewepụta mgbasawanye ọhụrụ na -akwụghị ụgwọ.
Aha a achọrọ OS 10.12, Intel Core 2 Duo processor, 2 GB nke Ram, NVIDIA GeForce 8600M GT, ATI Radeon HD 2600 Pro, 3 GB nke ohere diski ike yana dị site na weebụ site na egbeeluigwe.
Starcraft 2 bụ a Egwuregwu egwuregwu na oge onye nrụpụta site na Blizzard. N'adịghị ka Starcarft, ọ na-esiwanye ike, yana ngwa ngwa karịa ka ị hụtụrụla na egwuregwu atụmatụ oge. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ aha a, ịkwesịrị iji ahụigodo na òké.
A na -akwụ ọnụahịa zuru oke nke aha a na euro 59,99, agbanyeghị na -enye anyị ụdị n'efu na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ.
Ụdị Starcraft 2 efu na -enye anyị Nku nke nnwere onwe mkpọsa zuru oke, ọtụtụ ndị na -edeghị aha na ndị na -edeghị akwụkwọ, na ndị ọchịagha niile nwere nkwado.
Ọ bụrụ na ọ daa, ị nwere ohere mgbe niile ịzụta aha zuru oke iji kpọghee mkpọsa niile ... Starcraft 2 chọrọ site na OS 10.12, Intel Core 2 Duo processor, 4 GB nke Ram, NVIDIA GeForce GT 640M, ATI Radeon HD 4670 ma ọ bụ karịa, 30 GB nke ohere diski ike.
Iji budata Starcraft 2, ị ga -agarịrị egbeeluigwe.
Dota 2 bụ azịza Valve nye Njikọ Akụkọ Ifo na -atụgharị aha ahụ na mmekorita ya na ndị egwuregwu ndị ọzọ na ọgụ 5 megide 5.
Ndị hụrụ utu aha dị ka Warcraft, Diablo, Starcraft na aha Blizzard ndị ọzọ ga -enwe oke ọ forụ maka ndị dike ha kachasị amasị isonye na ọgụ 5v5, ma ọ bụrụ megide AI ma ọ bụ megide ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Aha a, na -enye anyị karịa ndị dike 80 ịtụgharị, ma ọ bụrụ na ịchọta nke masịrị gị n'ezie, ị nwere ike zụta ya ohere na-adịgide adịgide site na ego egwuregwu ma ọ bụ microtransaction.
Dị ka utu aha ndị ọzọ, microtransactions ka dị relegated ka hazie aesthetics nke ndị dike yabụ na ị gaghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla ka egwuregwu a zuru oke.
Dota 2 chọrọ nke OS 10.9, Intel Dual-core processor, 4 GB nke Ram, NVIDIA GeForce 320M, Radeon HD 2400, Intel HD 3000 ma ọ bụ karịa, 15 GB nke ohere diski ike ma ị nwere ike budata ya Steam.
Ọ bụrụ na ịmalitela ịchịkọta isi awọ, ọ nwere ike bụrụ na ị gụrụ egwu dị ka nwata Ụgbọ njem Tycoon Deluxe, egwuregwu ịme anwansị ụgbọ njem nke kụrụ ahịa na 1995. Na Open TTD ebumnuche anyị bụ inweta ego site na ibufe ndị mmadụ na ibu site n'ụgbọ oloko, ụgbọ elu, ụgbọ ala na ụgbọ mmiri.
Oge ọ bụla anyị bufere ihe ma ọ bụ ndị mmadụ nke ọma site na isi A ruo isi B, anyị ga -enweta ụgwọ ọrụ ga -enye anyị ohere wuo ụzọ njem ka mma, ebe aha a na -ewere ọnọdụ n'etiti 1950 na 2050.
N'adịghị ka Open TTD mbụ ọ bụ egwuregwu ọtụtụ mmadụ n'ịntanetị na mpaghara yana ndị egwuregwu ruru 255, na -enye anyị maapụ buru ibu karịa aha nke ọ dabere na ya yana ọmarịcha interface. Anyị nwere ike ibudata egwuregwu a n'efu Steam.
Agha maka Wesnoth bụ a egwuregwu egwuregwu dabere na ntụgharị atụgharị ya na agha dị na mpaghara hexagonal nke ga -akpọghachite gị na 90 maka ịma mma ya.
Battle for Wesnoth na -egosipụta mkpọsa otu ọkpụkpọ 16 na maapụ ọtụtụ mmadụ n'ịntanetị 46 nke ihe karịrị nkeji 200 ga -alụ ọgụ. Egwuregwu ahụ ewepụtala nnukwu onye ofufe na -akwado ya n'ihi ịdị mma na oke ọdịnaya, egwuregwu na -atọ ụtọ, yana eziokwu na ọ nweere onwe ya igwu egwu.
Obodo ahụ, n'aka nke ya, nyere aka site na imepụta nnukwu ego na -aga site na mkpọsa ọhụrụ na otu dị iche iche ruo n'ọrụ nka. Agha maka Wesnoth dị maka nbudata site na Steam.
Ma chọrọ, Mac anyị ga-ejikwa opekata mpe site na OS 10.8, 2,0 GHz dual-core processor, 2 GB nke RAM, 800 MB nke ohere diski ike.
Doki Doki Akwụkwọ Akwụkwọ!
Ọ bụrụ na -amasị gị egwuregwu dị jụụ ma ọ bụrụ na mgbakwunye, ị na -achịkwa bekee (Aha a adịghị n'asụsụ Spanish), ị kwesịrị ịnwale Doki Doki Literature Club! ọ bụghị na -ebu ụzọ gaa n'ihu na -agụ ma ọ bụrụ naanị maka aha ị kpebiri ịga n'ihu na nke ọzọ.
Doki Doki Literature Club bụ egwuregwu na -akpọ anyị oku ka anyị sonye klọb ọgụgụ, mana n'eziokwu ọ bụ egwuregwu egwu nke mmụọ. Ozugbo anyị sonyeere klọb a na -agụ akwụkwọ, ebe anyị nwere ike mata ụmụ agbọghọ na -eme ya.
Agbanyeghị, ka anyị na -abanye n'ime egwuregwu ahụ, n'oge na -adịghị anya anyị ga -achọpụta akwụkwọ Doki Doki. ọ bụghị maka ịchọta ịhụnanya anyị site n'akwụkwọ. Aha a na -akwatu mgbidi nke anọ n'ọtụtụ oge, na -ekepụta ahụmịhe dị iche karịa ihe ị ga -atụ anya ya na simulator mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Doki Doki Club Literature! dị site Steam y achọrọ OS 10.9, 1.8 GHz Dual Core Processor, 4 GB Ram, 350 MB nke ohere diski ike.
N'okpuru igwe igwe nchara
Ọ bụrụ na mgbe ị bụ nwata, ị jiri ihe nkiri eserese nke Monkey Island, Indiana Jones na ndị ọzọ jiri Beneath a Steel Sky Ọ ga -amata gị nke ukwuu.
Robert Foster, bụ onye akụkọ nke akụkọ a, onye ọbịa na -emeghị ihe ọjọọ tọrọ atọ n'ime nnukwu obodo ebe ndị nkịtị a na -emegbu emegbu na -ebi ma na -arụ ọrụ na nnukwu ụlọ elu… Ọ bụ ezie na ndị rụrụ arụ, ndị anyaukwu na ndị ọgaranya bara n'ime ala, na -echebe ha pụọ ​​na mmetọ niile.
Ezi nwa kwesịrị ịlụ ọgụ maka nlanarị … Chọpụtakwa ajọ okwu n'azụ ntọrọ ya… Iji nwee ọ thisụ aha nke dara n'ahịa n'afọ 1994, opekata mpe OS 10.6.8, Intel Core 2 Duo na 1 GB nke Ram ga -ejikwa ngwa anyị. Anyị nwere ike ibudata ya Steam.
Ụwa nke tankị Blitz
N'ezie ị nụla maka egwuregwu MMO tank a, egwuregwu efu na -akpọ anyị oku ka anyị bịa buso ihe mgbochi ndị ọzọ na ọgụ 7v7 na ọnọdụ 26 dị iche iche. World of tankị na -enye anyị ohere ịhọrọ karịa ụgbọ ala akụkọ ifo 300, nke ọtụtụ n'ime ha sonyere na Agha IIwa nke Abụọ.
Dị ka aha efu ọ bụla ọzọ, ịzụta ihe ịchọ mma ha echeghị uru ọzọ karịa ndị egwuregwu ndị ọzọ, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ aha a na -emefughị ​​ego.
World of Tanks Blitz dị maka ekwentị gị budata n'efu site na Steam, ị ga -achọkwa macOS 10.9 na 2 GB nke Ram iji nwee ọ.
Brawlhalla bụ 2D egwuregwu ọgụ egwuregwu ikpo okwu Ọ dakọtara na nyiwe niile nke aha a dị, yabụ anyị nwere ike iso ndị enyi ndị ọzọ na -eme ya site na iPhone, PlayStation, Xbox, iPad, smartphones Android ma ọ bụ mbadamba.
Aha a dị maka nbudata n'efu na ịzụrụ ihe na -emetụta ọmarịcha mkpụrụedemede n'enyeghị ụdị uru ọ bụlaBịa, ọ bụghị ịkwụ ụgwọ iji merie.
Kwa izu, anyị nwere ndị dike dị iche iche anyị ga -egwu, ndị dike anyị nwere ike zụta ka ha nwee ya mgbe niile na -enweghị dabere na ntụgharị mkpụrụedemede maka 20 Euro. Brawlhalla dị maka nbudata site na Steam.
Brawlhalla chọrọ nke OX 10.7 2 GB nke RAM n'agbanyeghị OS 10.5 na 4 GB nke RAM ka akwadoro. N'ịbụ egwuregwu egwuregwu ọtụtụ mmadụ, njikọ ịntanetị dị mkpa.
Akwụkwọ mpịakọta nke okenye: Legends
Akụkọ na -emeghị eme na -ewepụta mkpụrụedemede, mwube na ihe atụ sitere na saga Elder Scrolls wee tụgharịa ha ka ha bụrụ kaadị dijitalụ, nke ị ga-anakọta n'ime egwuregwu ma jiri ọgụ kọmputa na ndị egwuregwu ịntanetị.
Na-enye anyị a ọtụtụ ọdịnaya otu ọkpụkpọ, mana ihe kacha adọrọ mmasị bụ ịsọ mpi n'ịntanetị ozugbo, nke ị ga -ewu oche gị kacha mma iji kwadebe maka ọgụ siri ike.
Podemos budata n’efu Akwụkwọ mpịakọta ndị okenye: Legends site Steam. Na -achọ OS X 10.8 ma ọ bụ karịa, Intel Core 2 Duo 2 GB nke Ram na kaadị eserese nwere opekata mpe 256 MB.
N'otu oge nsogbu na -atọ ụtọ egwuregwu a na macOS, Eve Online bụ nhọrọ kachasị mma ịtụle ma ọ bụrụ na ịchọrọ aha MMORPG.
Eve Online na-enye anyị igbe igbe mbara igwe galactic nke nwere ike igwu egwu, ebe ị nwere ike inyocha ụwa ọhụrụ ndị mbịarambịa, bido ịzụ ahịa ma ọ bụ mikpuo n'ọgụ oghere.
Tupu anyị amalite, anyị ga -emerịrị ya họrọ site na agbụrụ anọ dị iche iche, yana ụdị azụmahịa dị iche iche, ọgụ na nka ndị ọzọ. Ma n'ezie, ị ga -ahọrọ ụgbọ mmiri kwesịrị ekwesị iji banye na mbara igwe wee malite ihe omume gị.
Akụ na ụba egwuregwu dị ukwuu, ị nwere ike iji oge gị niile nyocha na azụmaahịa, ma ọ bụ isonye n'otu n'ime ọtụtụ ndị na -achọ ike mgbe niile.
Otú ọ dị, abụghị egwuregwu dị mfe ịmụta, ọbụlagodi nkuzi dị n'ime egwuregwu maka ndị mbido, yabụ ị nwere ike nweta ndenye aha nhọrọ ma ọ bụ zụta mkpọ mkpọchi iji nyere gị aka melite nkà gị ma mee ka egwuregwu dịrị gị mfe.
Ihe achọrọ maka aha a ha dịtụ elu, yabụ ọ bụrụ na ị nwere Mac ochie, atụla anya na ị ga -enweta ihe kachasị na MMORPG a anyị nwere ike ibudata na ya Steam.
Fistant nke Frags
Ọ bụrụ na ị masịrị egwuregwu onye na -agba ụta nke mbụ, ị ga -anwale egwuregwu efu Fistful of Frags. Fistful of Frags bụ etinyere n'ọhịa ọdịda anyanwụ ebe anyị ga -eji egbe, egbe na egbe egbe gbachitere onwe anyị.
Ndị egwuregwu nwere ike họrọ otu n'ime ụdị anọ dị: Desperados, Vigilantes, Rangers na Banditos asọmpi na egwuregwu ịntanetị ọ bụla. Egwuregwu ọ bụla juputara na mgbachi mgbachi dị nso.
para download Fistful of Frags ị ga -akwụsị Steam. Site na OS X 10.7, 1 GB nke Ram na eserese dị mfe, ị nwere ike ịnụ ụtọ aha a nke chọrọ njikọ ịntanetị maka ọrụ ọtụtụ mmadụ.
Otu ebe e wusiri ike 2 bụ onye na -agba ụta n'ịntanetị nwere ọmarịcha nke nwere ọmarịcha eserese. N'agbanyeghị eziokwu na Team Fortress 2 ọ bụ naanị ọtụtụ mmadụ, ị nwekwara ike igwu egwu n'onwe gị.
Es na -atọ ọchị ọchị, na ụdị ụdị agwa dị iche iche n'ezie. Ọ bụrụ na -amasị ịcha mma na -atọ ọchị nke ọ na -enye anyị, ị ga -enweta aha a ngwa ngwa nke ị nwere ike ibudata na ya. Steam kpam kpam n'efu.
Anyị nwere ike ịkọwa egwuregwu Teeworlds dị ka Worms mana nweere onwe ya kpamkpam yana ebe ọ nwere ike kpọọ ihe ruru mmadụ 16 ọnụ.
Site oghe emeghe ma mepụtara site na ndị ọrụ na -egwu egwuregwu a. Ị nwekwara ike ịmepụta maapụ nke gị site na iji nchịkọta akụkọ maapụ egwuregwu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ cheta egwuregwu Worms, na Teeworlds ị nwere ike ịme ya ọzọ n'efu site na njikọ a Steam.
Na -ahapụghị Mac App Store anyị nwere Basketmania, egwuregwu emegharịrị site na ụdị iOS. Jiri ntụpọ ka dozie mbido trajectory wee tụọ bọọlụ. Ọ dị mfe iburu, mana n'oge na -adịghị anya ọ ga -amalite ịnye ahụmịhe siri ike karị.
Developer: NO2 Weebụ na Ngwa Ngwa, SL
Akwụkwọ akụkọ Solitaire
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu egwu solitaire kpochapụwo, dị ka nke sonyere anyị na Windows ruo ọtụtụ afọ, ị nwere ike iji aha ya bụ Deck Solitaire zuru ezu, dị maka gị. budata n'efu na Mac App Store.
Developer: Egwuregwu Kristanix
Super Stickman Golf 3 bụ otu ụdị nke anyị nwere ike ịchọta ugbu a maka iOS App Store yana kwa na Apple Arcade. Ihe ngosi golf a na-enye anyị nkuzi ọhụrụ, ike, kaadị ịnakọta, ụdị egwuregwu dị iche iche gụnyere ọtụtụ ...
Anyị nwere ike nwalee ruo oghere 20 n'efu. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta egwuregwu ahụ niile, anyị ga -agabiga ndenye ọpụpụ. Super Stickman Golf 3 chọrọ macOS 10.8 ma ọ bụ karịa.
Egwuregwu Super Stickman Golf 3
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Egwuregwu 20 kacha mma Mac n'efu
Ngwọta maka HDMI anaghị arụ ọrụ na Windows 10